apple iphone x vs samsung galaxy note 8
Kuru Nhau & Ongororo Apple iPhone X vs Samsung Galaxy Cherechedzo 8
Apple iPhone X vs Samsung Galaxy Cherechedzo 8
Nhasi, mafoni emafoni anowanikwa zvirinani kupfuura zvavaimbove. Kwemadhora zana kana mashoma, unogona kutora kumba hachizi-nyowani nyowani iyo & apos; zvinopfuura kugadzirira kukutora iwe online, kubatanidza iwe neese ako aunofarira magariro midhiya, uye kunyange kutora mamwe mapikicha-anotaridzika.
Kunyange izvo zviyero zvekupinda-zvepamusoro zvakanakira vashandisi pamabhajeti akaomarara, hapana & apos yekushomeka kwemhando dzinodhura dzevatengi vanokwanisa kushandisa zvakati wandei, vachipa zvinowanda-zvakapfuma mapakeji ane makuru, epamusoro-res skrini, epamberi ekufungidzira masisitimu, mashandiro akanaka, uye dhizaini dzinoyevedza.
Kumugumo wekupedzisira weiyo spectrum, isu & maapos taona kuwanikwa kwekupenga kunodhura & ldquo; boutique & rdquo; mafoni emakore ikozvino, uye nepo ivo & apos vapa zvekuwedzeredza kuburikidza nekushandisa kweprimiyamu zvigadzirwa senge dehwe, goridhe, uye kunyange mabwe anokosha, kazhinji kazhinji kwete kwese kufadza kwacho kwaingova kudzika kweganda, uye nharembozha dzaive marara.
Asi gore rino, isu & apos; tazopedzisira taona yepamusoro-magumo maseru-musika mafoni anotanga kusundira kumusoro kurwisa - uye kunyangwe pamusoro - iyo $ 1,000 mucherechedzo. Kunyangwe isiri yekushamisira yekuratidzira semhando dzakatsetseka-dzakasarudzika mamodheru emakore apfuura, idzi nyowani-nhare-nhanho dzakasimba dzakashongedzwa, zvichiunza vashandisi vadzo imwe yeanocheka-epamberi tech tech inowanikwa.
Kana iwe & apos; tikashandisazve izvi zvakawanda parunhare, iwe nemaapos zvinonzwisisika zvichatarisira kuti kona yega yega yechiitiko haizopfuure ibwe & apos; kurasa kubva pakukwana, asi kunyangwe padanho iri repamusoro, isu tichiri kuwana maruses uye minuses ayo anogona kuita kuti ruoko rumwe ruite kunge runonakidza kupfuura kukwikwidza kwaro.
Nhasi isu & apos; tinotyora zvaunogona kutarisira kubva kune mbiri mbiri-yepamusoro, mafoni anodhura zvakanyanya kutenderera: ino zhizha & apos; s Samsung Galaxy Note 8, uye ichangoburitswa Apple iPhone X.
Kunyangwe sezvo mafoni achiva angangoita ese skrini, kukanganisa kweyakagadzirwa zvakanaka dhizaini & apos; haina kurasikirwa patiri
Sezvo isu & apos; tave tambotaura, 2017 yakatemerwa kudzika munhoroondo ye smartphone segore apo kutaridzika kwemafoni efoni kwakachinja zvakanyanya, zvese nekuda kwekuwanika kweakawedzera-wide masikirini anosundira bezels kune avo vakaonda zvakadaro, uye kuendesa mafoni ane zviso zvinenge zvese zvinoratidzwa. Aya maitiro & apos; anga achirovera kutenderera kubva pakutanga-gore mureza wevaviri LG G6 uye Samsung Galaxy S8, asi isu & apos; tave kutoona kunatsiridzwa kweiyi yechipiri wave yemamodeli, ayo ari maviri Chinyorwa 8 uye iPhone X inhengo.
Pakati pezviviri, Chiziviso 8 iri nyore foni hombe: kureba, kupamhama, kukora uye kurema kupfuura iyo iPhone X. Uye zvirinani maererano nemagadzirirwo epanyama, Apple & apos; foni ine zvimwe zvakafanana neiyo GS8 kupfuura yayo phablet-saizi. muzukuru. Izvo zvine mukana wekukonzera kumwe kushushikana, kunyanya kana zvasvika pamutengo, sezvo apo Chinyorwa 8 chiri kumusoro uko neiyo iPhone X mune ino yekupedzisira-premium nzvimbo, iyo GS8 inogona kuve iine chete 75 muzana yemutengo we iPhone & apos; s .
Asi kuenderera mberi nekutarisa dhizaini, hazvigoneke kufuratira iyo Inoti 8 & apos; kureba kwazvo. Nepo iyo yekuwedzera-yakafara screen chimiro chemaviri mafoni anobatsira kuchengetedza kuruboshwe-kuenda-kurudyi kupinda mukati mekutambanudza kwechigunwe chako, Chiziviso 8 chinoda kumwe kutenderera kuti usvike kumucheto wayo wepamusoro - uye kana izvo & apos; sa chinodiwa chekuwana yako kukurumidza kumisikidza uye zviziviso, saizi yefoni & apos; s inotanga kuve diki mhaka.
Pazasi pemafoni ese ari maviri, iwe & rsquo; uchawana maspika pamwe nekuchaja / dhata dhata, asi Cherechedzo 8 imwe-kukwira iyo iPhone X nekukandawo mune yeanalog headphone jack. Neimwe nzira, Samsung inowanawo nzvimbo yefoni & apos; s S Pen stylus pasi uko, futi. Padivi rerudyi rweumwe neumwe ruoko rune simba / bhatani bhatani, iro rakakura muhukuru pane iyo iPhone X pasina chikonzero chiri pachena. Vhoriyamu zvinodzora zvinorarama pamusoro kuruboshwe, zvakabatana neiyo-kwete-yekuvhiringidza switch pane iyo iPhone, uye yakatsaurirwa Bixby bhatani pane Chinyorwa.
Kumashure kumashure, yega yeaya mafoni anoburitsa makamera avo maviri, asi nepo maSamsung & apos; s ari ezvose zvinangwa uye zvinangwa zvakasungirirwa, zvine chiratidzo chete chemuromo wemuganhu unovaparadzanisa kubva kune mamwe ese maNote 8 & apos; s kumashure, Apple & apos ; s ine yakazivikanwa yakadamwa kamera bump pane iyo iPhone X. Uye nepo Apple ichichengetedza yayo inozivikanwa yepamusoro-kona kamera kuiswa, iyo X inodedera kumusoro-ne-parutivi kurongedzwa kweiyo iPhone Plus mamodheru mukufarira kumusoro-kusvika-pasi dhizaini. pano.
Isu tinofanirwawo kutaura nezve izvo zvisipo pano, uye ese ma handsets anodonhedza avo vanoziva Hardware mabhatani epamba. Samsung yakamonora bhora richidzokera kumashure neiyo GS8, uye Chiziviso 8 chinopa zvimwe zvakafanana, kusanganisira kumisikidza ruoko nema & apos; s scanner yeminwe kuti ugare nekamera Hardware parunhare neposhure. Iyo & apos; haina kukodzera kuiswa, kana zvichikonzerwa nekukwirisa kwakaita scanner uye iko kutambanudza kunogona kusvika. Kunyange Apple yakadonhedza saizvozvo bhatani repamba, hapana & apos hapana kuyedza kunoendesa chigunwe chekupenda zvigunwe, pachinzvimbo ichivimba chete neFace ID scanner yeiyo biometric yekusimbisa - isu & apos; tichazotaura nezve chiitiko chevashandisi icho chinopa mune zvishoma zvishoma.
Samsung inogona kunge iri hombe uye iine micheto yakakombama, asi Apple haigone kurohwa nekupenya uye kukwidza kwese.
Kune maviri skrini anonzwika senge ane zvakawanda zvakafanana, iwo maratidziro ari paCherechedzo 8 uye iPhone X inyika yakasarudzika. Ngatitangei & apos; s titange nekuisa zvakafanana kunze kwetafura: ivo & maapuro; ese ari maviri akasarudzika akaenzana mapaneru, ane chiyero che18.5: 9 yeSamsung, uye padhuze ne19.5: 9 yeApple.
Ose ari mapaneru eOLED, yekutanga yeApple, uye ese ari maviri ane makona akakombama, chimiro icho & apos; chinokurumidza kufanana neapamusoro-soro kuratidzwa.
Kune maviri masikirini ari kure nenzira yakarohwa, izvo & maapos zvakawanda izvo zviri kugoverwa, asi kunyangwe neizvi zvakafanana, ivo vaviri vagadziri havana kuwana kushomeka kwenzira dzekuita kuti masikirini avo abude. Samsung inopa Cherechedzo 8 chidzitiro chakakombama-kumucheto, ichikombama zvishoma zvishoma pamusoro pemativi marefu emuviri wephablet & apos; Ipo paine & apos; s ichiri chidiki chemuviri wefoni unogadzira bezel kunyangwe neaya akakombama micheto, iwo & apos; zvakanyanya kudiki pane zvatinoona pane iyo iPhone.
Kunyangwe kana iyo & apos; s kuhwina kweSamsung, Apple inowana zvidiki zvidiki zvepamusoro uye zvepasi bezels - asi zvinobvumwa nekuda kwe & ldquo; kubiridzira & rdquo; yeyayo skrini & apos; s epamusoro notch, inogara foni & apos; s kumberi-yakatarisana kamera, earpiece, uye Face ID Hardware. Asi kunyangwe neiyo protrusion, Apple inowona zvishoma yekukunda maererano neesesthetics nekuchengeta iwo mabhezeri akatenderedza skrini yayo inowirirana zvinoshamisa. Mhedzisiro yacho ndeyekuchenjera asi ine simba: izvi hazviite senge foni ine chidzitiro pairi, asi sefoni yaive yakavakwa yakatenderedza skrini yayo. Kune mimwe mhedzisiro kune ino dhizaini dhizaini - kunyanya iyo yakatemwa, yakakomberedzwa makona ndeyakawanda yakafara nharaunda kupfuura paCherechedzo 8, uye iwe unorasikirwa iyo yakawanda yakawanda screen real estate semhedzisiro - asi zvinongoratidzika kunge zvakanaka uye zvakachena izvo isu tinokahadzika vashandisi vazhinji vanozosungirirwa pane izvo.
Ese ari mairi mafoni anokwanisa mamwe akanyatsojeka kubuda kwemavara, asi Samsung inowana mamwe mapoinzi ekuti ingagadziriswe sei kuburitsa kwayo skrini, nevashandisi vanokwanisa kusarudza pakati kwete kwete chete dzinoverengeka seta -mavara-ekupa modes, asiwo kuwedzera tweak color balance kune kwavo kufarira. Padivi rerutivi, Apple & apos; s True Tone system inovavarira kugadzirisa michina yekugadzirisa - kuchengetedza zvinhu zviri nyore asi ichipa kudzora kushoma.
Apple inowana kukunda kukuru kwekupenya kwescreen, neiyo iPhone X & apos; s max yakaburitsa zvakanyanya kupenya kupfuura iyo Chiziviso 8 & apos; s - uye izvo & maapos; ichokwadi kune imwe nzira yakatowanda kana iwe & apos; tichichengeta kupenya pasi pesimba rekudzora.
Ratidza zviyero uye mhando
Kunonyanyisa kupenya Yakakwirira iri nani
Kupenya kushoma(husiku) Pazasi zviri nani
Kusiyanisa Yakakwirira iri nani
Delta E rgbcmy Pazasi zviri nani
Delta E grayscale Pazasi zviri nani
Iyo CIE 1931 xy color gamut chati inomiririra iyo set (nharaunda) yemavara iyo inoratidzwa inogona kubereka, iine sRGB colorpace (iyo yakaratidzwa katatu) inoshanda sereferenzi. Iyo chati inopawo inomiririra inomiririra yekuratidzira & apos; s kurongeka kwemavara. Iwo madiki makwere akayambuka miganho yetriangle ndiwo mareferenzi emavara akasiyana siyana, nepo madiki madiki ari iwo chaiwo matanho. Sezvineiwo, dhoti rega rega rinofanirwa kuve rakamisikidzwa pamusoro penzvimbo yaro. Iyo 'x: CIE31' uye 'y: CIE31' kukosha mutafura pazasi pechati kunoratidza nzvimbo yeyero imwe neimwe pachati. 'Y' inoratidza kuvhenekera (mune nits) yemuvara wega wega wakayerwa, nepo 'Target Y' iri chiyero chinodiwa chekuvhenekera iro vara. Chekupedzisira, 'ΔE 2000' ndiyo Delta E kukosha kwemuvara wakayerwa. Delta E tsika yepazasi pe2 yakanaka.
Izvi zviyero zvinoitwa uchishandisa Mifananidzo Inoratidza 'CalMAN calibration software.
Iyo Ruvara kururamisa chati inopa zano rekuti kuswedera sei kuratidzwa & apos; s akayerwa mavara ari kune avo avanonongedza iwo maitiro. Mutsara wekutanga unobata iwo akayerwa (chaiwo) mavara, nepo mutsetse wechipiri wakabata referensi (chinangwa) mavara. Iko kuswedera kwemavara chaiwo kune akananga iwo, zviri nani.
Iyo Grayscale chaiyo chati inoratidza kana chiratidziro chine chaiyo chena chiyero (chiyero pakati petsvuku, girini uye bhuruu) pamatanho akasiyana egrey (kubva murima kusvika kupenya). Iyo yepedyo iwo chaiwo mavara ari kune iwo Target iwo, zvirinani.
Peji rinotevera: Kupindirana uye Kushanda
chinyorwa 9 kuburitswa zuva verizon
wedzera nharembozha nyowani nhare
Java shandura mepu kuva json
Samsung SM-N910A inoita kunge yeGreen Note 4 ine 5.7-inch Quad HD skrini
Iko yako iPhone 5 bhatiri kamwe kamwe haina kubata kuchaja nenzira yayaimboita? Apple inogona kutsiva iyo mahara
OtterBox Defender Rugged ye Samsung Galaxy S6 kesi kuongorora
AT & T inoratidza gargantuan Samsung Galaxy View 2 piritsi
T-Mobile inozivisa Un-carrier 4.0, ichadzorera ETFs yekuchinja kubva kuAT & T, Verizon, kana Sprint
Spotify & apos; s chinhu chitsva pakupedzisira chinozviisa parutivi neApple Music
Inonzi Galaxy S7 Edge inobuda nemitengo uye zviri mubhokisi
Walmart ine Apple & apos; s 6th Gen iPad iri kutengeswa pamutengo wakakura kwenguva isina mubvunzo
Maitiro ekutarisa Facebook mameseji pane Android pasina kutumira kuverenga kuverenga